Blusens ekipa mpanonta | Vaovao momba ny gadget
ActualidadGadget.com dia iray amin'ireo tranonkala miresaka ao Espana amin'ny gadget, software, computing, internet ary teknolojia amin'ny ankapobeny. Hatramin'ny 2006 dia nitatitra isan'andro isan'andro momba ny fivoarana lehibe eo amin'ny sehatry ny teknolojia izahay, ary koa mamakafaka fitaovana marobe miainga amin'ny solosaina matanjaka indrindra ka hatramin'ny tranga finday tsotra indrindra amin'ny alàlan'ny mpandahateny, mpanara-maso, finday avo lenta, takelaka na fanadiovan-drivotra robot mba hanome ohatra vitsivitsy fotsiny. Manatrika koa izahay hetsika ara-teknolojia lehibe avy amin'izao tontolo izao toa ny WMC any Barcelona na ny IFA any Berlin izay amindrantsika ny ampahan'ny ekipan'ny tonian-dahatsoratray hahafahana manao feno fanaraha-maso ny hetsika ary atolotra ny mpamaky anay ny fampahalalana rehetra amin'ny olona voalohany sy amin'ny fotoana fohy indrindra.
Ankoatr'izany, amin'ny ny fizarana fampianarana anay azonao atao ny miditra amin'ny karazana fampahalalana azo ampiharina amin'ny boky fampianarana feno izay misy sary sy / na horonan-tsary fanampiana ary mandrakotra lohahevitra maro samihafa ka avy aiza izy ireo ny fomba famolavolana tablety Android a ny fomba fampidinana sary avy amin'ny facebook manome ohatra vitsivitsy.
Raha te hahita ny ambiny amin'ireo lohahevitra izay atrehinay amin'ny Internet izahay dia mila fotsiny miditra amin'ny pejy fizarana ary eo no hahitanao azy rehetra voalamina amin'ny lohahevitra.
Mba hanomanana an'ity atiny kalitao rehetra ity sy amin'ny fomba henjana indrindra azo atao, Actualidad Gadget dia manana ekipa mpamoaka lahatsoratra izay manam-pahaizana amin'ny teknolojia vaovao ary manana traikefa an-taonany maro amin'ny fanoratana atiny nomerika. Raha te-ho ao amin'ny ekipan'ny fanontana izahay mila mameno ity takelaka ity fotsiny ianao ary hifandray aminao haingana araka izay tratra izahay.
Tonian-dahatsoratra sy mpandalina Geeky. Tia gadget sy teknolojia vaovao. Liana amin'ny fahalalana sy fitsapana karazana gadget, smartphone, solosaina, takelaka, solosaina finday, sns., Ary faly amin'ny fizarana ny fahalalako amin'izao tontolo izao amin'ny teny.
Hatramin'ny niandohan'ny taona 90, dia liana tamin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny teknolojia sy ny informatika aho. Noho io antony io, ny fitsapana ny gadget misy izay avoakan'ny marika lehibe sy kely, mamakafaka azy mba hahazoana tombony betsaka indrindra amin'izany, no iray amin'ireo fialamboly tiako indrindra.
Tiako ny zava-drehetra mifandraika amin'ny haitao sy karazana gadget. Nandinika ny karazana fitaovana elektronika rehetra aho nanomboka tamin'ny taona 2000 ary fantatro hatrany ireo maodely vaovao izay efa hivoaka. Izaho aza mandray sasany rehefa manao fanazaran-tena hafa amin'ny filan'ny nofo, ny sary ary ny fanatanjahan-tena amin'ny ankapobeny. Tsy hitovy izy ireo raha tsy misy azy ireo!
Tia teknolojia vaovao, fa indrindra gadget. Fantatro tokoa ireo fitaovana marobe avoaka isan-taona hahafahana mahazo ireo gadget izay mahaliana ahy indrindra. Vantany vao tratra, dia dinihiko lalina izy ireo hahafantarako ny tombony azony.
Mifamatotra foana amin'ny gadget sy kojakoja teknolojia. Mizaha toetra, manadihady ary manoratra momba ny smartphone sy ny karazan-jaza, kojakoja ary fitaovana teknolojia amin'izao fotoana izao aho. Miezaka ny "mivoaka" foana, mianatra ary manaraka ny vaovao rehetra.
Tiako ny teknolojia, tsy ny rehetra no Apple ... Mieritreritra aho fa mihamaro ny orinasa mamorona zavatra mahaliana ary eto izahay hizaha ny vaovao farany momba ny teknolojia. Miezaka ny hahazo ireo gadget rehetra vitako sy miditra ao an-tranoko aho ...
Fitiavana amin'ny teknolojia, tiako toy ny ankizy manana gadget. Tiako ny mampitaha ireo maodely isan-karazany, mahita endrika vaovao ary hahafantatra ireo vaovao mbola ho avy. Ny gadget dia afaka manamora ny fiainantsika, izay no antony tiako hizarana izay fantatro momba azy ireo.
Injenieran'ny fitiavana amin'ny teknolojia vaovao sy izay rehetra manodidina ny tambajotram-pifandraisana aho. Ny sasany amin'ireo gadget tiako indrindra dia miaraka amiko isan'andro, toy ny smartphone na tablette, fitaovana manampy amin'ny fanatsarana ny fahalalako sy ny zavatra iainako amin'ny gadget.
Manampahaizana amin'ny solosaina na dia tia ny tontolon'ny teknolojia amin'ny ankapobeny sy ny robotika aza, fientanam-po izay mitarika ahy hanadihady sy hamotopototra ny tambajotra iray manontolo amin'ny fitadiavana karazana zava-baovao momba ny gadget, na ho an'ny fianarana na ho an'ny tetikasa.
Teknolojia vaovao no tena tiako. Manohy mankafy hatrany aho amin'ny andro voalohany niresaka momba ireo gadget mety hitsena ny tsena: endri-javatra, fikafika, ... raha fintinina, ny zava-drehetra momba ny gadget elektronika rehetra.
Tena liana amin'ny teknolojia aho, indrindra ny telefaona finday. Tiako ny mahafantatra ny vaovao momba ny gadget, ary mizaha toetra azy ireo hahitana, noho izany, raha toa ka manatanteraka izay nampanantenainy izy ireo na raha gadget izay tsy dia mahaliana isan'andro.
Gadgetmaniaco, izay mankafy fitaovana fitsapana izay azo ampiasaina hanehoana ny heviny amin'ny endrika kanto rehetra. Ho fanampin'izay, tiako ny hizaha toetra ireo gadget tonga amiko, koa manana traikefa be dia be amin'ny teknolojia vaovao aho ary tiako ny mamaha ny fisalasalana rehetra mety hitranga mandritra ny fampiasana sy ny fikirakirana azy.
Mpahay siansa amin'ny informatika izay mankafy foana ny famotopotorana ireo gadget vaovao tonga eny an-tsena. Raha misy zavatra tiako tiako handaniako ny fotoanako maimaim-poana dia manadihady tsara ireo fitaovana elektronika rehetra tonga amiko izy io.
Tiako izay rehetra misy ifandraisany amin'ny teknolojia sy ny gadget. Te hianatra foana ny tetika rehetra ananan'ny karazana gadget isan-karazany aho, ka tena ilaina amin'ny fialam-boly na asa.
Tovolahy liana amin'ny teknolojia sy ny tontolon'ny motera. Ny fahafantarana ny gadget amin'ny halaliny, ny fahitany ny fomba fiasan'izy ireo na ny fihatsarany no zavatra tiako be.
Lehilahy iray tia teknolojia aho. Te hianatra aho raha mbola momba an'io lohahevitra io, indrindra ny gadget. Na iza na iza mahaliana ahy, fa ny drôna, ny mandeha ho azy ary / na ny mandeha ho azy an-trano sy ny faharanitan-tsaina artifisialy no fahalemeko.
Nahaliana ahy foana ny fitaovana, fa ny fahatongavan'ireo finday avo lenta dia nampitombo ny fahalianako tamin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny tontolon'ny teknolojia. Mino marina aho fa tsy nisy gadget tsara kokoa sy mahasoa noho izany.
Fitiavana amin'ny Internet sy ny teknolojia vaovao, tiako foana ny manandrana ireo gajety rehetra efa azoko, nahita ny fampiasana rehetra nananan'izy ireo, ary mampitaha azy ireo amin'ireo kinova taloha mba hahitana raha tena nihatsara. Tiako ny hahafantatra ny vaovao rehetra momba ny gadget azonao, ny fahalalana tiako ho zaraina aminao.